PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Abaqeqeshi abasaligqizi qakala ikhefu
Abaqeqeshi abasaligqizi qakala ikhefu
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-01 - EZEMIDLALO -
UKUDLALWA kwemidlalo ye-Afcon ngoJanuwari okuphoqa abaphathi bePremier Soccer League (PSL) ukuthi ihlehlise ngamasonto amane ukudlalwa kwemidlalo yePremiership neyeNational First Division (NFD) bathi abasakugqizi qakala ngoba yisimo abangenawo amandla okusishintsha.
Okwenza ukuthi iPSL kube yiyona yodwa e-Afrika ukuhlehlisa imidlalo yayo kungenxa yokuthi iyona kuphela enemidlalo yeligi eqala phakathi nonyaka ekubeni wonke amanye ezwenikazi i-Afrika iqala ngoFebhuwari ize isongwe ngoNovemba.
Esikhathini esiphambili abaqeqeshi bebeyaye bakhale ngokuthi ikhefu le-Afcon liphazamisa umgqigqo osuke usabanjwe abadlali bamaqembu abo ngoba kusuke sekufinyelelwa emaphethelweni esigaba sokuqala semidlalo.
Kubaphoqa ukuthi baqale phansi benze amanye amalungiselelo njengoba abadlali besuke kade besemaholidini kaKhisimusi kuphinde kuthathe amanye amasonto amane kungadlalwa imidlalo yePremiership.
UClinton Larsen, oqeqesha iLamontville Golden Arrows, utshele Isolezwe ngeSonto ukuthi kuyena kufana nokuthi umsebenzi uqhubeka ngaphandle kwezinkinga.
Abafana Bes’thende bahlezi endaweni yesithupha ukusuka phezulu kwilog yePremiership kanti abafuni ukuphuma eqoqweni lamaqembu ayisishiyagalombili ukuze bangasali emzileni kuhle kwamaxhegu.
“Angisiboni isidingo sokukhala ngalelikhefu ngoba sekunesikhathi eside laqala.
“Kufanele sizitshele ukuthi ngesikhathi kuqhubeka le midlalo nathi kufanele umsebenzi wethu uqhubeke.
“Konke kweyame ekutheni wena mqeqeshi uzihlelele kanjani izinto zakho. Sizothola amasonto ambalwa ekutheni senze amalungiselelo okuqala kwesigaba sisibili sesizini.
“Uma kuphela imidlalo ye-Afcon kufanele sibe sesikulungele ukuqhubeka lapho besigcine khona ngonyaka odlule,” kusho uLarsen.
Ngokunjalo noGavin Hunt, ocija iBidvest Wits, uhambe emagameni kaLarsen wathi akusekho okusha abangathi bayakuqabuka ngemidlalo nekhefu le-Afcon.
“Asisekho isidingo sokukhala ngoba sekunesikhathi eside kwenzeka isimo esfanayo.
“KwiBidvest umsebenzi uqhubeka njengokujwayelekile njengoba ngikhuluma nawe ngiphuma ejimini.
“Engizohlomula ngakho ngokungabikhona kwemidlalo ukubuya ngesikhathi kwabadlali abebelimele.
“Kuzokuthi kuqambe kuphela imidlalo ye-Afcon bazokube sebekulungele ukudlala,” kusho uHunt.
IBidvest ingelinye lamaqembu abhekeke ukuba sembangweni wokubanga isicoco seligi ngokuphela kwesizini.
Ngesizini edlule iqede ilele endaweni yesibili ngemuva kweMamelodi Sundowns eyayiqhwakele phezulu kwilog.
U-Eric Tinkler, ohlabe ikhefu likaKhisimusi izinto zingamhambelanga kahle ngemuva kokuthi iqembu lakhe iCapeTown City lehlulwe imidlalo emibili lilandelana ngemuva kokunqoba indebe yeTelkom Knockout, uthe ayikho into abangayenza bengabaqeqeshi.
“Akukho esingakwenza ngoba ngeke kushintshe lutho. Okwethu ukuqinisekisa ukuthi abadlali basesimeni esikahle siyabahlelela imidlalo yesihle ukwenzela ukuthi bahlale bekulungele ukudlala.
“Leli khefu ngeke liphazamise amaqembu asembangweni wesicoco kodwa wonke amaqembu adlala ngaphansi kwePSL,” kubeka uTinkler.
Kusongwe unyaka amaCitizen ehlezi endaweni yesithathu ngemuva kokuthi ehlale endaweni yokuqala amasonto ambalwa kwaze kube ahlulwa imidlalo emibili yokugcina.